नेपा’लमै रिक्सा चलाएर अʼपांग श्रीमान पालेर छोरीलाई इन्जिनियर पʼढाउदै महान चे’लीको संघर्षको कथा ! – Ap Nepal
नेपा’लमै रिक्सा चलाएर अʼपांग श्रीमान पालेर छोरीलाई इन्जिनियर पʼढाउदै महान चे’लीको संघर्षको कथा !
स्वदेशमै रिक्सा चलाएर छोरीलाई इन्जिनियर र अपांग श्रीमान पाल्दै महान चेली (सम्मान स्वरुप सेयर गरौं)अझै पनि हाम्रो समाजमा महिलाहरुलाई बाहिरको काम केही आउदैन उनीहरु मात्र केवल गुहनीमात्र हुन भनेर हेपिन्छ । हुन त नेपालकै कुरा गर्ने हो भने बिभिन्न ठुला ठुला पदहरुमा महिलाहरु पुगिसकेका छन ।
तर मानिसहरुको सोचाई पनि त्यती परिवर्तन हुन भने सकेको छैन । उस्तै सोच्ने मान्छेहरुको लागि एउटा गतिलो उदाहरण हो कबिता राईको । यो खबर धनकुटा जिल्लाको हो ।आहा कस्तो राम्रो काम हाम्रै नेपाल अर्थात धनकुटा घर भई धरान बस्दै आएकी कविता राई भने फरक किसिमकी छिन । जो अपाङ्ग श्रीमानको पालन पोषणका लागि रिक्सा अर्थात् सिटी सफारी चालक छिन ।
श्रीमान को जन्म जात नै एउटा खुट्टा छैन मैले नै उहाँलाई पाल्दै आएको छु उनले भनिन । धनकुटा रहँदा नै विवाह भएकी उनी आफ्नो परिवार धान्नका लागि सहर आईन । धरान आएपछि के गर्ने कसो गर्ने उनले केही सोच्नै सकिनन । उनले आफैले जसोतसो एउटा सिटी रिक्सा किनिन र आफैले चलाउन थालिन ।
बजारको प्रतिस्पर्धामा आएपछि उनमा आफ्नो कमाइप्रति गौरव गर्ने भावना र समाजको सम्मान दुवै थपिएको छ ।अहिले रिक्सा चलाएर परिवार धान्न सक्दा उनी आफुलार्ए खुसी लागेको कुरा सुनाउछीन । अहिले उनको घरमा उनी र श्रीमान सँगै एउटा छोरी पनि छन् उनको पढाइ खर्च र श्रीमान पाल्न रिक्सा चलाएकै भरमा पुगेकै छ उनले बनाउ छीन ।
अलि अलि बचत पनि गर्ने गरेको छु । उनले भनिन् । पुरूषले मात्र सवारी साधन चलाउन सक्छन् भन्ने सोंच भएका र श्रीमानको कमाइमा मात्रै बाँच्ने महिलाका लागि यो गतिलो उदाहरण उनले पनि ठानेकी छिन् पहिला पहिला त केही गर्न सक्दिनँ कि जस्तो लाग्थ्यो ।स्वदेशमै रिक्सा चलाएर छोरीलाई इन्जिनियर र अपांग श्रीमान पाल्दै महान चेली।
उनले थपिन् र आँट कसेर निस्किएपछि सम्भव हुने रहेछ भन्ने थाहा पाइसकेको छु । उनी प्राय भानुचोकमा भेटिन्छिन् । यस्तै धरानकी मिरा लामा ९ वर्ष अघि श्रीमान बितेपछि आफैले केही गर्नुपर्छ भन्दै लागिपरिन । उनले सिटी सफारी किनिन् । सिटी सफारीले अहिले छोराछोरीको पढाइ लगायत परिवार धान्दै आएकी छिन् ।
छोरीलाई ठेलामा व्यापार गरेरै इन्जिनियर बनाएर गर्ववान्वित उनी हाल छोरा कक्षा ११ मा पढ्दै गर्दा खुशी छिन् ।पहिला ठेला ठेलेरै उनले जेठी छोरीलाई इन्जिनियर पढाइन् र इन्जिनियर बनाइन् ।जेठी छोरी पूजा लामा इन्जिनियरिङ बनिसकेकी छिन् कान्छी छोरी ठेला ठेलेरै त्यतिबेलै उनले घरजग्गा जोडिसकेको बताइन् ।
अहिले ६ वटा रिक्सा किनेर अन्य महिलालाई पनि उनले आत्मनिर्भर बनाउँदै आएकी छिन् । उनको लक्ष्य अब ग्यारेज खोलेर अझै धरानका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने छ । उनी हाल अखिल नेपाल रिक्सा चालक सङ्घकी अध्यक्ष समेत छिन् ।
Prevगरे किन हुन्न चटपटे पानीपुरी बेचेर सुन्तली दिदीको यति ठुलो पर्गति (भिडियो सहित)
Nextनेपाली बोल्ने अफ्रिʼकन युवतीः नेपाʼलीसँग बिहे गर्छु भन्दै केपी ओलीलाई यसो भनिन् (भिʼडियो सहित)
स्मारिका ढकाल (चर्चित टिकटक स्टार)को भयो डिभोर्स , लाइभमा आएर पूर्वपति विवेकले सबैमा गरे यस्तो अनुरोध – हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
देशभर कुलमान घिसिङले यस्तो अभियान चलाउने हेर्नुहोस्..
तपाँईलाई थाहा छ? ‘कपिल शर्मा शो’का कलाकारले प्रत्येक एपिसोडमा कति लिन्छन् पा; रिश्रमिक ?
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (38490)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (36574)
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (33040)